Glass Bottle abenzi, abaXhasi - China Glass Bottle Factory
12oz 350ml amagwebu yesepha impompo kwisixhobo impompo iglasi ibhotile ukuhlamba isicoci
Iibhotile zeglasi ezicacileyo lukhetho olufanelekileyo lokugcina kakuhle iisepha ezingamanzi okanye ezinegwebu, into yokuthambisa kunye nokunye., Kungaphantsi okuxineneyo okujongeka kuyilo oluhle, ipompo yegwebu yeplastiki yi-BPA yasimahla kwaye umbala ungenziwa ngokwezifiso Cinga ngokuthengwa kwesambuku ukonwabela amaxabiso ethu apheleleyo
8oz 250ml yeglasi yeglasi ibhotile ngentsimbi emnyama igwebu kwisixhobo
Ibhotile yeglasi ye-AMBER ejikeleze impompo yentsimbi engenasici yinto efanelekileyo yokuhambisa isepha kwaye inokusetyenziswa njengebhotile ye-shampoo, okanye i-conditioner okanye i-lotion. Iibhotile zeglasi ezimnyama zisetyenziselwa ukugcina iioyile ezifanelekileyo / iaromatherapy blends kuba zikhusela iioyile elangeni, yiyo loo nto zinceda ukuzigcina zintsha ngoku.
Zombini amagwebu kunye nokuhambisa ulwelo ziyafumaneka!
355ml 12oz ecacileyo iglasi isandla isepha ibhotile kwisixhobo matte emnyama stainless nempompo amagwebu kwisixhobo
Ibhotile yeglasi ye-12oz ebonakalayo eneebhotile ezimnyama ezingenanto ezingenanto zinokuphinda zigcwaliswe kwaye zibhetyebhetye. Zingasetyenziselwa ukuthambisa, iisepha, iisepha okanye ukupheka. Umphezulu we-stainless steel kwibhotile yeglasi yomelele kakhulu. Insimbi engenasici inokuhlanjwa, isetyenziswe kwaye icocwe njengoko kufuneka, kwaye inokugcinwa kuzo zonke iinjongo; ezi bhotile zeglasi zenziwe ngeglasi eshinyeneyo kwaye zinokuvaswa kwindawo yokuhlamba izitya.
Iglasi 400ml ngesandla isepha ibhotile ngentsimbi igwebu kwisixhobo pump kunye abicah sleeve
Ezi bhotile zeglasi zichaziweyo zeBoston Round lukhetho olufanelekileyo lokugcina kakuhle ulwelo okanye isepha enegwebu, into yokuthambisa kunye nokunye. Umbala wesilivere oxutywe nge-304 yentsimbi engenampompo iyagalela Sikwabonelela ngesiseko sokukhusela abicah kwiibhotile zempompo!
8oz amber Boston ngeenxa zonke iglasi isitya isepha ibhotile nempompo kwisixhobo zeplastiki
I-classic kuyo nayiphi na indawo yokuhlambela okanye ikhitshi. Le 8oz amber iglasi Ibhotile isepha kwisixhobo sisiqulatho ebukekayo imveliso yakho yokhetho. Impompo yeplastikhi emnyama inokususwa ukuze ukhulule ibhotile, ecutha inkunkuma yokupakisha kwaye yinto efanelekileyo yokuhlamba izandla. Izinto eziphambili zeglasi yegolide evuthiweyo (isanti, isoda ash kunye nelitye lekalika) zifunyenwe ekuhlaleni ukunceda ukukhusela imixholo kwimitha ye-UV.
16oz ecacileyo Boston impompo ngeenxa zonke kunye kwisixhobo ulwelo zeplastiki
Ibhotile yeglasi ebonakalayo kunye nokuhambisa yindlela elula yokubonelela ngesixhobo sokucoca ngesandla. Umphezulu wempompo awukrunelwanga, onokugcwalisa ibhotile yakho kwimveliso ekhethiweyo ixesha elide kunye nokunciphisa inkunkuma yokupakisha. Iglasi ecacileyo ikhangeleka intle ngesepha yesandla ecacileyo okanye enemibala, ukongeza inkangeleko yendalo nelula nakweyiphi na indlu yangasese. I-classic kuyo nayiphi na indawo yokuhlambela okanye ikhitshi. Ngelebheli yetshokho ukuze ubhale injongo yokusebenzisa kuyo!
8oz 16oz matte ulwelo isepha kwisixhobo yeglasi ibhotile
Le bhotile yokuhambisa isepha yeglasi emnyama epeyintiweyo kunye nempompo emnyama yeplastiki, iyafumaneka nge-8oz, 16oz, 32oz kunye nezinye izinto. Ilungele isepha, ishampu, isixhobo sokucoca umzimba, ukuhlamba umzimba, ukucoca ngesandla kunye nezinye iimveliso zolwelo.
16oz 500ml umbala omhlophe boston ngeenxa zonke iglasi ulwelo isepha ibhotile nge kwisixhobo steel stainless
Ibhotile yokuhambisa isepha eneglasi ecocekileyo necocekileyo. Ezi zixhobo ezimhlophe zokuhambisa iisepha ze-vittke zikulungele ukucoceka kunye nokwenza lula indawo yokuhlambela, kwaye iza nesigqubuthelo sempompo yentsimbi esingenakunqunqwa ukuba singagcwaliswa. Ibhotile yethu yesepha yeglasi yokuhambisa yinto entle yendalo kunye neebhotile zeplastiki, ekuvumela ukuba wenze eyona mbonakalo incinci kwikhaya lakho liphela.
Iglasi Bottle Nge Pump wekhadi, Sula iibhotile Pump Pump, Iglasi Bottle Nge Spray Pump, Iglasi Ibhotile yokuthambisa ngePomp, Iibhotile zeglasi zeempompo zeeoyile ezifanelekileyo, Iibhotile zePompo yeGlasi yeShampoo,